Isifundo: I-Jailbreak kunye neFirmware yesiqhelo ye-3.1.3 (iguqulwe) kwi-iPhone 2G | IPhone iindaba
Isifundo: IJailbreak ngeFirmware yesiqhelo 3.1.3 (iguqulwe) kwi-iPhone 2G
iberllin | | iPhone, Jailbreak, Izifundo kunye neencwadana
Esi sisifundo sokufaka I-Firmware (yesiqhelo), ilungiswe ndim, nge sn0wbreeze v1.3 kwi iPhone 2G.
Ngale ndlela, xa uyifakile, iya kuba neJailbreak eyenziwe kwaye isimahla kuye nawuphi na umsebenzisi.
I-Firmware njengoko ndisitsho yenziwe ndim kwaye isebenza ngokugqibeleleyo (ihlolwe).
Uyifakile iTunes 9.0.3
Ukuba ayifakwanga, hlaziya ifayile ye iTunes ngokuthe ngqo okanye uyikhuphele kwiphepha le-Apple ukusuka apha kwaye uyifake:
iTunes 9.0.3 yeWindows
iTunes 9.0.3 yeMac
Khuphela iFirmware yesiko (Modified):
Yenza NONE umzekelo nge-PKGBukukhutshelwa ngaphambili kwi-Cydia, ukuze uphinde ufumane izicelo ezazivela eCydia.
Qhagamshela i-iPhone kwaye ungqamanise i-iPhone ne-iTunes ukuze uphinde ufumane abafowunelwa, ikhalenda, usetyenziso oluvela kwiVenkile ye-Apple ...
Qinisa isitshixo sokutshintsha (KwiWindows) ngaxeshanye nesitshixo "Buyisela" kwi iTunes. Iqhosha lokushiya limelwe lutolo oluchaziweyo olukhombe phezulu (⇧).
Qinisa Isitshixo se-Alt (ye-Mac) ngaxeshanye nesitshixo "Buyisela" kwi iTunes.
Iwindow iya kuvela ukukhangela iFirmware Custom 3.1.3 ekhutshelweyo, ekhethiweyo kwaye ukubuyiselwa kuqala.
Xa ugqibile sele ikwiFirmware 3.1.3 ngeJalbreak kwaye ikhutshelwe nawuphi na umsebenzisi.
Ngqamanisa neTunes kwaye ufumane abafowunelwa, ikhalenda, usetyenziso ..., kwiVenkile yeApple
Vula i-Cydia, hlaziya isifakelo seCydia kwaye ufake iPKGBckup ukubuyisa usetyenziso lweCydia nge- "Buyisela"Oku kuya kuthatha ixesha kwaye kuya kuxhomekeka kwinani lezicelo ezifakiweyo.
Uninzi lweengxaki ezinokuthi zenzeke ekufakweni
1-Iimpazamo 16XX, 23 ...
Ezi mpazamo zibangelwa ziingxaki ngamazibuko e-USB eekhompyuter
Guqula izibuko le-USB kwikhompyuter
Yigqithise IREB ngexesha lesiphene: Khuphela i-IREB
Okwesibini-Ukutshixa i-iPhone yalo naluphi na uhlobo
Faka i-iPhone kwimo ye-DFU kwaye uqale ngaphezulu
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Izifundo kunye neencwadana » Isifundo: IJailbreak ngeFirmware yesiqhelo 3.1.3 (iguqulwe) kwi-iPhone 2G
Izimvo ezi-214, shiya ezakho
Molweni kwaye okokuqala enkosi kwaye ndiyavuyisana nomsebenzi wenu. Ndine-iPhone 3gs ukusukela ngale mvakwemini kwaye inyani kukuba ndilahlekile kakhulu. Ndifuna ukwazi ukuba le firmware uyibonisayo ye-2g, ndingayifaka nakwi-3gs zam kwaye ke ndisebenzise enye inkampani. Andikwazi ukujonga iboot kuba ukhetho oluvela kwisifundo ngaphakathi komphathi wesixhobo kwi-win xp yam alubonakali.
Ukubulisa kunye nokubonga kwangaphambili
Ndiyabulela kakhulu ngokwabelana nge-berllin, ndiyathemba kuphela isiko lakho fw, ulunge kakhulu ngokuthatha umsebenzi kunye nobubele bokuabelana noluntu
Umsebenzi ogqwesileyo, sele ndiyisebenzisile enye ye-fw yakho, enkosi ngokwabelana ngayo, ngeenkcukacha zenkcazo kunye nomzamo. Ukubulisa
Isisombululo sabo baxhonywayo: bukela iphonografi ukuze ingaphinde ixhomeke kubo kwaye babambeke
Ndiyabulela kakhulu i-berllin ngokungahambi kakuhle, kwaye nokwenza kube lula kakhulu, ndine-2g endiza kunika umama kwaye bendifuna le, nangona inyani ikwicinga lesibini, andazi ukuba Ndingasetyenziswa kakhulu ejele ...
Muchissssisssimas enkosi !!!!
Owu! krelekrele. Kodwa ngokuqinisekileyo. Ngaba le firmware yesiko iyayitshintsha i-logo ye-manzanita yenye indlela yesinanapple kunye nezinye? okanye yonke into "iqhelekile"?
Zintle !!! njengesiqhelo, enkosi kakhulu kunye nemibuliso evela Mexico.
UBerllin ubuze i-icon yeBootNeuter, yenzelwe ntoni? ngoba ndiyivulile yabe iphone indishiye ndimile okomzuzwana.
Molo berlin, enkosi kakhulu ngefirmware. Uqhekekile.
Ndinemibuzo emibini, makhe sijonge ukuba ungayiphendula na:
1) Ngaba izaziso zokutyhala ziyasebenza nale firmware?
2) Ngaba kuyacetyiswa ukuba ubuyisele i-iPhone kwi-iTunes okanye kungcono ukuba "uqale ekuqaleni"?
Molo BERLLIN Ndinombuzo, ndifake i-itunes 9.0.2 kwikhonkco elidlulileyo, uphakamise u-9.0.1, kodwa ngoku kwiscreen kwiimfuno ozicelileyo zokufaka i-9.0.3? Nguwuphi umahluko okhoyo phakathi kwale ndinayo kunye naleyo uyicaphulayo ngoku, ngaba inokuba ngu-9.0.2? kunye megaupload ayindivumeli ukuba ndikhuphele unayo nayiphi na enye ikhonkco yokukhuphela ifayile yakho?
Enkosi kakhulu, le yesithathu isiko firmware oyenzayo endiyisebenzisayo, isebenze okokuqala, indishiyile ngaphandle kwe-wi-fi, kodwa ingena kuphela kuseto, ngokubanzi, buyisela, buyisela useto lwenethiwekhi, ndiyifumene iyasebenza, ndiyifakile iappsnc ye-3.1, kwaye izicelo ezivalelweyo zisebenza ngokuchanekileyo
Beka ibheyile sitsho
EBerlin… awazi ukuba ndinibulela kangakanani… haha ​​imibuliso evela e-Ecuador !!! :::…
Phendula Puso bailon
Isetyenziswa ngumoya we-sn0wbreeze, kodwa xa sele ifuthisiwe ayisasebenzi kuwe.
Akukho sidingo sokuhlaziya kwii-itunes, vele ufake i-firmware esele ilungisiwe
Ndibeka i-iTunes yamva nje ukuba uyihlaziye.
Isebenza kakuhle nge-9.0.2 kunye ne-9.0.3.
Nge-9.0.1 andikhange ndiyijonge kwaye andizukuyijonga kwakhona
Ikhonkco lisebenza okoko ndijongile. Andikwazi ukuyilayisha kwenye indawo kuba ndineakhawunti yokulayisha kuphela kwaye andinakho ukuba iifayile zam zisasazeke kwamanye amaphepha.
Ikwayi-akhawunti ebhatalwa ngepremiyamu, ukufaka nje iifayile kuwe ... indibiza intlama.
Umalume kaBerllin uyamangalisa ngokwenene, oku kukugcinwa kwakho kwesi-3 endikusebenzisayo kwaye kuyamangalisa, akukho ngxaki inye, ndinombulelo kuwe ngonaphakade
Molo apho! Ndiyavuyisana nawe ngomsebenzi wakho!
Ndinengxaki, xa ndikhetha i-firmware yakho ukuba ndiyifake ndifumana i-popup enebali elilandelayo "I-iphone" iphone kaGustavo "ayinakubuyiselwa kuba ifayile ye-firmware ayihambelani". Ngaba unalo uluvo lokuba kutheni le nto isenzeka kum? Andicingi ukuba ndenza into engalunganga ...
Ukusukela ngoku ndiyaluxabisa uncedo lwakho kwaye ndiyathemba ukuba singasebenzisana sonke njengokuba usenza!
Kwenzeka into efanayo kum, kodwa ngeyakho, xa ndiyila enye kunye nekhephu okanye ngeyona efanayo, indivumela kuphela ukuba ndibuyisele iphone ngenkqubo yesiqhelo ye-itunes yokukhuphela ethambileyo kwaye uyihlaziye, kodwa ungayibeki ethambileyo ngaphambili kwikhompyuter yam
Ukuba une-2G akufuneki uyifumane le
Isebenza ngokugqibeleleyo, sele ndenze uninzi kunye neekhompyuter ezi-2 ezahlukeneyo (iiWindows kunye neMac)
Ukukunika umbono kwiintsuku ezi-2 zokuba uphakanyisiwe, sele ikhutshelwe i-1400 ...,
Yintoni engalunganga xa usithi awukwazi ukuyifaka?
Ewe, jonga, nalu ulusu lomyalezo endilufumanayo:
Sele ndikholelwa, ndiyakholelwa kuphela kwinto eyenzekileyo kuwe.
Isikhangeli sinokuthi sitshintshe ulwandiso lwefayile xa ulikhuphela.
Jonga ukuba ulwandiso ngu: ".ipsw" hayi ".zip", njengoko ndicinga ukuba kufanelekile.
Ukuba yile nto kufuneka utshintshe i-zip iye kwi-ipsw
akukho nto, ukuba ikwifomathi echanekileyo, kwaye isekwishumi elinesithathu. Olunye uluvo?
Kwaye ndizamile ukufaka eyokuqala kunye nengaphuculwanga ethambileyo 3.1.3, yokuvavanywa, kwaye indixelela into enye, andisazi ukuba ndenzeni
Ekuphela kwento eyenzeka kum kukuba awufaki iFirmware ehambelana ne-iPhone yakho?
Molo apho, eli lixesha lesi-2 ndisebenzisa enye ye-firmware yakho kwaye yonke into ihamba kakuhle, inye kuphela into yokuba xa ndifuna ukubeka iWifi, ukhetho olukhoyo alubonakali, oko kukuthi, kubonakala nakum iphelile kwaye andinakukwazi ukuyikhetha…. Ngaba uyazi ukuba kungenxa yantoni?
Igama loqhagamshelwano Albertp sitsho
Ye 3G kukho into ??
Andazi ukuba mandikuxelele ntoni, i-iPhone yam yenye ye-iPhone yokuqala ephume eSpain, yi-8GB, kwaye ngasemva ithi kuphela "i-iPhone", akukho 3G okanye 3G. Ngokubhekisele kwisoftware, ndikhuphela ezakho, kwaye kufanelekile ukuba zilungele i-2g (endikholelwa ukuba, andizukuphazama, yeyokuqala iphone)
Molo: ingxaki yam kukuba yonke into ilungile kodwa andifumani nkonzo
Ndizamile ngo-3.1.2 no-3.1.3 kwaye ihlala injalo.
Yifowuni ye-2G kwaye ifuna ukuba ingafumani nkonzo, i-wi-fi iyahamba kakuhle
Ungandinika isisombululo enkosi kwangaphambili
E-Berlin, ndizamile nje kwi-imac yam, indinika impazamo (14), uyazi ukuba yintoni?
Ishishini elibi. Yenza kwakhona.
ESpain akukho 2G
abo kuthi banabo bakhululwe njengabaphambukeli.
Ezokuqala eziphume eSpain ziyi-3G kwaye le firmware ayisebenzi kuwe.
Anterion kunye neAlbertp
Yeyiphi i-baseband onayo kwaye yeyiphi i-firmware ???
uyiqale kwakhona amatyeli amaninzi ...
nqamula kwaye uqhagamshele i-3G amatyeli aliqela ...
Xa usenza impazamo, sebenzisa i-IREB okanye utshintshe izibuko le-USB
Ndiyitshintshile izibuko kodwa akukho nto ilandela impazamo, ndiza kuzama ireb kufuneka ndiyikhuphele kwaye ndiza kubona ukuba isetyenziswa njani andinalwazi ..
Sawubona uBerllin akukho nto eyenzekayo ukusuka kwi-rya kwaye ukuba idibene nekhompyutheni, ngomzuzu ndiyinqamula, uxhulumaniso lwenethiwekhi lulahlekile. andazi ndithini
I-Wi-Fi yakho ayilungiswanga kakuhle.
Yijonge kwaye uza kubona ukuba ayisiyiyo i-IP yakho.
Qhagamshela kwaye unqamle uqhagamshelo lwe-wifi amatyeli aliqela kunye nokuqala kwakhona. yenze amatyeli aliqela.
Kuya kufuneka uyidlulise i-IREB ngexesha lesiphoso.
Sukulala nam Oo ngoku ndifumanisa ukuba yi-3g, kodwa ayifaki nto kwindlu, ibeka i-iPhone kuphela xa iphuma eSpain nge-moviestar, emva koko ndiza kuzama ukuthamba nge-3g kunye Ndiza kukuxelela i-XD
Kulungile, ndibone ukufaka kwi-3g, kodwa ingxaki kukuba ndisebenzisa ikhadi elahlukileyo kunelomphathi osemthethweni, ke kuyakufuneka ndilinde i-XD, kunjalo, ndiyayibulela kakhulu into yokuba uyayinyamezela imemez XD yam
Kulungile kwaye kuphantsi! Besele ndisebenzise isiko lakho kwi-3.1 .. esebenza kakuhle kum! enkosi irhabaxa!
Molo, ndiza kukhuphela le Firmware intsha. Ndiyathemba ukuba isebenza ngokuchanekileyo njengeCustom Firmware 3.1 oyenzileyo kwithuba elidlulileyo. Ndonwabile ngomsebenzi wakho. Kulunge kakhulu.
Ndiyabulela kakhulu. Ndiza kuphawula ukuba ihambe njani ...
Molo uBerllin uxolele ubunzima bam, kodwa ndicinga ukuba khange nindiqonde, into endingenayo yiNkonzo yoMqhubi (i-wi-fi isebenza ngokuchanekileyo) ndinemovistar kwaye ndifumana umgca kwaye ukuba idityaniswe kwikhompyuter yi-USB, i Okwangoku ndiyithatha ifowuni ilahlekelwe kukugubungela. andazi ndithini
Berllin, ndinengxaki yempazamo ye-14 kwaye ngamanye amaxesha i-1600. Ndizamile yonke i-USB ngokufanayo ...
Ndikwenzile oku kwi-Mac, emva koko ndiza kuba nakho ukuyivavanya kwiifestile. Makhe sibone ukuba iyasombulula ngoluhlobo.
Ukuba akunjalo, andazi ukuba yintoni enye endinokuyenza ...
Ewe, ayisebenzi kum kwiifestile.
Ndikhuphele iFirmware amaxesha ama-2 kwaye ikwifomathi efanelekileyo.
I-iphone yam yi-2g ye-8gb.
Ngokukodwa, impazamo endinika yona ngoku yile ilandelayo:
I-iphone ayinakubuyiselwa. Impazamo engaziwayo yenzekile (14) »
Ndiyidlulisile i-Ireb kwaye ayenzi nto.
UAntonio uyibeke kwimodi ye-DFU kwaye iya kukusebenzela
Ewe, njengoko kuchaziwe apha http://berllin.blogspot.com/2008/11/modo-dfu.html Khange ndikwazi ukuyibeka kwimowudi ye-DFU.
Isikrini asihlali simnyama, ukuba akunjalo ukuba umfanekiso we-usb uphuma ukuze uyixube kwi-itunes.
Ke ukuba kubonakala ngathi i-iPhone ifunyenwe kwimowudi yokubuyisela kwimeko yesiqhelo, kodwa ndenza inkqubo efanayo yokufaka i-firmware kwaye ndifumana impazamo ye-14 okanye ye-1611 ...
U-Antonio awuyibeki kakuhle kwi-DFU, landela imiyalelo
Ndicinga ukuba ndiqale iphone kwimowudi ye-DFU, ubuncinci ndifumana uphawu oluthi:
ITunes ibhaqe i-iPhone kwimo ekuphulukenwe nalo. Kufuneka ubuyisele le iPhone ngaphambi kokuba uyisebenzise kwi-iTunes.
Ndinika ok kwaye ucofe iqhosha u "alt" kwi-mac kwaye unike ukubuyisela.
Ndikhetha i-firmware ye-berllin, indixelela ukuba ndikhuphe isoftware, emva koko ithi: 'I-iphone ayinakubuyiselwa. Kwenzeke imposiso engaziwayo (1600). »
Ndiphelelwe lithemba. Ndifuna uncedo nceda…
UAntonio uyizame ngohlobo olungaphambi kuka-3.1.2 umzekelo ukubona ukuba iyakusebenzela, yenzeke kum
Molo, ingaba izakusebenzela ipod touch 2g ????
Ndizamile u-3.1.2 kwaye indixelela into enye ... andazi ukuba ndenzeni ...
Uncedo ngabafund ...
Umbuzo ongeyena we-firmware. Xa ndifuna ukungqamanisa i-iPhone yam nePC, kwizicelo zindixelela ukuba ayigunyaziswanga kwaye xa ndifuna ukugunyazisa iPC, ndifumana ukuba sele ndigunyazisa iikhompyuter ezi-5. Ngaba oku kunesisombululo?
UAntonio ndinengxaki efanayo ndifumana impazamo ye-14 kwaye andiphumelelanga ndibuyele kwi-firmw 3.1 Ndizamile nge-IREB kwaye ayenzi nto, ingaba ukwazile ukuyisombulula?
Molo, khange ndikwazi ukusombulula okwangoku. Ndenze yonke into endiyibonileyo kwiindawo ezahlukeneyo, kwaye akukho nto. Okwangoku ndinayo i-3.1.3 ekhuphela i-iTunes, kwaye kunjalo, ivaliwe.
Ndizamile nje 3.1 kwaye yandinika impazamo 1601.
Kuvele kum ukuba inokuba yingxaki kwi-usb, kuba ndakuba ndithe "esi sixhobo singasebenza ngokukhawuleza." kodwa kwenzeka into efanayo kum Ndizamile kwiNgwe nakwiWindows 7.
Molo, ndikwazile ukufaka i-firmware ebendikade ndiyisebenzisa ngaphambili, 3.1.
Ukwenza njalo, kuye kwafuneka ndidlulise i-IREV 2.1. Abanye nditsibe impazamo ye-16xx okanye ye-14.
Ngoku ndizolile, kodwa ndingathanda ukwazi ukuba zeziphi ezi mpazamo zibangelwa yile nto, ekubonakala ukuba yenzekile nakuSalva.
Ndingathanda ukukwazi ukubeka i-firmware 3.1.3.
Molo uBerllin kuqala, enkosi kakhulu kwii-firmwares, kuba isiko lakho lokuqala endilifakileyo andisabasebenzisi abanye. Ndiyaxolisa ukukukhathaza ngombuzo kodwa iyaqhubeka indinika into emva kwexesha elide ukwenza into ecaphukisa umncinci wam ke ukuba ne-iphone 2g ene-firmware 3.1.2 kunye ne-baseband 04.05.04_G ndizoyisusa. Enkosi kwangaphambili kwaye uxolo ukuba ngumbuzo osileyo.
Ndiza kukuxelela ukuba uyikhuphele kwisiko eli-3.1.2, kodwa ndicinga ukuba sele uyenzile
Ewe, andicingi, kuba inokugunyaziswa kuphela ngamaqela ama-5 ubuninzi. Ngayiphi na imeko, kuya kufuneka unxibelelane nenkonzo ye-Apple.
Ziingxaki kubaqhubi be-USB
Ngapha koko, ngoku kukho i-IREB esombulula uninzi lwezi ngxaki, kodwa kwiinyanga ezidlulileyo kuye kwafuneka senze into eyenziwa yi-IREB, kodwa ngesandla. Yayiyinkqubo enzima kakhulu, uyabona, bendizakuphuma kwaye abanye abayenzi loo nto, balinda iiyure ezimbalwa, ungaphinda uphinde uhambe? Kutheni, andazi, kodwa bebehlala beza uphume ngomonde omncinci kunye neentsuku ...
Akufanele uyisongele, kodwa ukuba une-3.1.2, sukuhlaziya.
Ayinakho uphuculo olubalulekileyo lwee-iPhones, inayo i-Ipods kwaye ayibalulekanga kangako
Ndiyabulela kakhulu i-berllin, ngoko ngoku ndiza kuhlala njengoko ndandinjalo, (3.1), ubuncinane i-sweat of death sele ilahlekile ...
Ndicinga ukuba oku kuya kuhlala kusenzeka kum, akunjalo?
Ndifuna ukuhlaziya i-iPhone 2G yam ibe ngu-3.1.3 kwaye ndiyakuxelela ukuba ndisenempazamo efanayo nale bendikhe ndayikhankanya. Msgstr "Impazamo engaziwayo 14". Ndibuyele e-Lower ifemi, njengoko bendicebisile kwaye nayo ayisebenzi. Nditshintshe iikhompyuter kwaye ayisebenzi. Ndibaleke i-IREB kwaye andisoloko ndinempazamo efanayo engaziwayo 14. Ngethamsanqa ndikwazile ukuyibuyisela i-firm 3.1.2. Umntu wayenento efanayo nge-2G iphone. Baye bakwazi ukuyilungisa. Enkosi.
Ndiyabulela kakhulu uBerllin kwaye ndiza kuhlala ndinje, ukuba ngoku iselfowuni ibalulekile.
Molo berllin, ndiyayilandela yonke le nkqubo kodwa ukukhetha i-firmware andifumani khetho ngokucinezela kushif, indivumela kuphela ukuba ndibuyisele i-firmware yoqobo kwaye andikwazi ukuyivula, kufuneka ndenze ntoni?
Rhoqo, kodwa kuncinci kunokuba ucinga, kuba apha ubona kuphela iingxaki ...
Impazamo 13 kunye ne-14: Ezi mpazamo zihlala zisonjululwa ngokulandela inyathelo elinye okanye nangaphezulu apha ngezantsi:
1. Faka isisombululo sokusombulula ingxaki yodwa se-USB, kubandakanya ukusebenzisa izibuko le-USB elahlukileyo ngqo kwikhompyuter.
2. Beka ihabhu ye-USB 2.0 phakathi kwesixhobo kunye nekhompyuter.
3. Zama i-pin-30 Dock USB cable.
4. Ukuphelisa ungquzulwano lwesoftwe yomntu wesithathu ngokulandela amanyathelo kwi: iTunes yeWindows: Ukusombulula ingxaki kwiSoftware yoKhuseleko.
5. Ukufakwa kwesoftware yomntu wesithathu kusenokwenzeka ukuba kutshintshe ubungakanani bokuqala bephakheji kwiWindows ngokufaka ukungena kweTcpWindowSize kwirejista. Ubungakanani beepakethe engachazwanga kakuhle kunokubangela le mpazamo. Nxibelelana nomenzi wesoftware efakele ukuguqulwa kobungakanani bephakheji ngoncedo.
6. Zama ukubuyisela kwenye ikhompyutha okanye inethiwekhi esebenza kakuhle.
-Njengoko ubona, yingxaki yezixhobo zakho
-Makhe sibone ukuba unengxaki na kwikhebula?
Uyenza gwenxa ...
Cinezela iqhosha leShift ngexesha elifanayo kunye nokubuyisela iqhosha ...
Ngokuqinisekileyo ucinezela esinye isitshixo ...
Nokuba awuyenzi ngaxeshanye, okanye isitshixo asisebenzi ...
Sele ndiyifumene kodwa kutheni iwifi yam ingasebenzi ??? Ndidibanisa kodwa andinakufikelela kwivenkile yeapile okanye naliphi na iphepha ngesafa
Ngokuchanekileyo ngokufanayo nam. Ndivavanye kwi-1 pc nakwi-imac (lepard kunye windows7), kuzo zonke i-usb, kodwa ke ndakwazi ukubeka 3.1.
Enkosi ngengcaciso nangomsebenzi owenzayo kwi-berllin.
Enkosi kakhulu ngempendulo. Icacile; kodwa ndinombuzo.
Ndikwazile ukufaka isiko eliqinileyo 3.1.2 ngaphandle kwengxaki. Ifem eyi-3.1.3 enezinto ezinzima endingenakukwazi ukuyenza?
Kananjalo ndiyakuxelela ukuba ndisebenzisa iikhompyuter ezi-2 ezahlukeneyo ezinezibuko ezahlukeneyo ze-USB ezi-8 (kuvavanywe konke) Ukuba bendinengxaki zekhebula, ngekhe ndibenazo iingxaki ngokuqina 3.1.2?
Ngapha koko, okwangoku ndiza kuhlala kule femu. Ndiyabulela inyani, niyingqondi ngale mxholo we-iphone. Basinceda kakhulu kubo bonke abo, njengam, abazi kangako ngalo mbandela.
Enkosi kwakhona kwaye ukwanga okuvela eArgentina.
Jonga i-IP kwaye uza kuyibona ukuba ayiyiyo eyakho.
Qhagamshela kwaye unqamle iqhosha le-Wifi amatyeli aliqela, ukuqala kwakhona i-iphone, kwaye ekugqibeleni ihlala ihleli kunye ne-IP yakho.
Andikwazi ... ayidibanisi nam, kwaye ngeBluetooth yintoni ekufuneka ndiyilungiselele ukuze ifumane ezinye iifowuni okanye ifumane idatha ???
I-bluetooth kwi-iphone i-hands-free kuphela okwangoku.
Yenza esi sifundo ukubona ukuba i-wifi isonjululwe na:
Faka umqondiso wakho ngaphandle kwengxaki, kodwa ngoku andiboni iividiyo ezivela kwi-Youtube okanye kwiiposti zeendaba. kukho into engekhoyo yokufaka
Ukusebenza kwakhona kulungile
Kwenzeka into efanayo kum njenge-Dacmx1. Ayizukundivumela ndidibane neYouTube kwaye ndilahlekelwe ziiFavorites zam. Indivumela kuphela ukuba ndibukele iividiyo nge-ITunes.
Zonke ezinye zilungile. Ukufakwa okulula kwaye kukhululekile.
Dacmx1 kunye noJoaquín:
Ndicinga ukuba ngokungathethi kwanto, oko kuthetha ukuba iWifi iyasebenza
Faka esi siqwenga ukubona ukuba uyayisombulula:
i-berllin (pss le bendisele ndiyibekile kwenye indawo kodwa ndiza kuyishiya apho ukuze ungayijongi apho)
brooo enkosi kakhulu ngempendulo yakho kodwa i-vdd ayinakuba yi-T_T ...
Zininzi ii-pss ekuqaleni ukuba yonke into ibisebenza kakuhle (ndiyathetha, bendilandela isifundo ukuya kwimfezeko) kodwa ndinomyalezo othi impazamo (1604) kwaye emva koko awuphumi kamva bandinike inkqubo yalonto Impazamo ekucingelwa ukuba yayiqhuba kakuhle yonke into ... ndafumana enye ethi impazamo (14) kwaye iphone yahlala ikwimo ye-DFU kwaye ayenzi enye into ... iyaziphinda kwaye iqhubeke nakwelo lizwe iyatshisa kakhulu ... Ndiyathemba ukuba ungandinceda, ndingavuya kakhulu.
Ndiaaaa ndilibale…. I-psss njengoko iphone ikwimo ye-DFU i-pc ayisayiboni ... ndiyakwazi ukuvula i-iTunes kwaye ukuba kubonakala ngathi ifuna ukubuyiselwa kodwa ayikho enye into ...
Ngaphambili ndiyabulela kakhulu !!!!
I-Wifi iyasebenza, iyaqhagamshela kwaye yonke into ilungile. Kuphela xa uzama ukuvula i-YouTube iphuma ukuba ayinakudibana, ngamanye amaxesha ibuza igama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha. Ukuba indivumela ndibukele iividiyo kwi-iTunes, kodwa ukuba ndizama ukungena kwi-YouTube ngeSafari, ayizukundivumela ndibukele iividiyo.
Ndinengxaki kwimaphu, ayikwazi kufumana "indawo okuyo", nangona ezinye zibonakala zisebenza kakuhle.
Isiziba osibonisayo asiveli kwiCydia.
Madoda uyimontro kule ngoku ndinengxaki encinci ngo-3.1.3 ukuba ndifumana impazamo eyi-14 kwaye ndiyazi ukuba kutheni nditshintshe indawo ye-USB kwaye akukho matshini nditsho nakwi-mac yeofisi. ndinike umbono wokuba ndiphinde ndiyenze le ATT: Imac enzima. Ndishiye imeyile yam ngempendulo yakho, enkosi ngayo yonke into ,,,,
Imoto kaJuan sitsho
Andazi ukuba ndingavalela njani i-iphone 3gs zam, 3.1.3 akukho ndlela okanye umntu andixelele into nceda, umbuliso.
Phendula kwimoto yejuni
UAndrew Medina sitsho
NGENXA YEPHUTHA, EHLAZIYIWE KWI-VERSION 3.1.3 ANDIYAZI UKUBA NDIBUYISELE NJANI KWELIDLULEYO UKUZE NDINCEDE
Phendula u-ANDRES MEDINA
Sele ndiyifakile ipatch kwaye isebenza kakuhle: YouTube kunye nevidiyo zephephandaba
Joaquin: ungakhangela i-patch (PUSH FIX) kuGoogle, ndifumene enye idilesi, kuba uyifumene, uyayikhangela eCydia kwaye uyifaka njengoko isiza kwisikhokelo esiboniswe nguBerllin
UJulio Mejia sitsho
Molo uBerlin khuphela le firmware 3.1.3 intsha kodwa xa uyifaka ndifumana impazamo eyi-14 yokutshintsha kwamazibuko kwaye akukho nto itshintsha ikhompyuter kwaye akukho nto ingaqhelekanga kukuba ndiyibuyisela nge-3.1.2 kwaye ifaka ngaphandle kwempazamo iya kuba yiyo ungayi phantsi kakuhle kwi-fimware 3.1.3? Kuyanceda ukuba ndifuna ukuyihlaziya ibe ngu-3.1.3 Ndine-iPhone 2g ye-8gb indala kodwa ndiyayithanda kakhulu imibuliso ye-jijij evela e-El Progreso, yoro Honduras Central America
Phendula kuJulio Mejia
Sebenzisa i-redsn0w 0.9.3 oya kuyifumana apha, ukubona ukuba uyayisombulula:
Xa impazamo iphuma sebenzisa IREB:
esi sifundo si-2g, andiphenduli kuba siyabhida abantu
yenza le khokelo
Ukuba awuyifumani, sukuphazamiseka kwaye uyiyeke kuba le firmware ayinikeli galelo kuyo nayiphi na iphone, kuphela kwi-ipod
hlaziya i-ipod touch 2g ukuya kwi-3.1.3 nge-firmware yesiqhelo inokukhutshelwa kwi-3.1.2
IBerlin… andiyifumani iPush Fix patch nakweyiphi i-repo (BeYourIphone kunye ne-iPhoneil.net)… ungandinceda ngendawo endikuyo ???
Kuxhomekeka kwi-iBoot yakho, ukuba indala ukuba inokuba nakho (andizami), kunye neinshurensi entsha engenakubakho
Inokuba bayisusile kuba ndingayiboni
Molo unjani, ndizamile iFimware yakho kwi-iPhone yam kwaye intle kakhulu, enkosi.
kodwa ndinombuzo, umhlobo une-iPod Touch 2g engenayo i-jailbreak, ucinga ukuba iyasebenza? okanye ukuba unayo nayiphi na ikhonkco apho une-firmware ye-iPod Touch 2g, ndingayixabisa ngokwenene.
Andenzanga nayiphi na i-firmware ye-ipod Touch 2G.
Ungayenza kuphela ukuba unayo iBoot yakudala
Indoda enzima sitsho
Ayisebenzi, indinika impazamo eyi-16xxx, ndiyayitshintsha izibuko kwaye akukho nto ucinga ukuba ndiyabulela
Andifumani Push Fix kuyo nayiphi na i-repo. Kwenzeka kum njengoPuso. Ngaba kunokwenzeka ukuba uyilayishe ngenye indlela?
Ingxelo ithi "http://fishbone.ge"
Isiqwenga sithi "Push Notification Fix"
Ndiyifakile kwaye isebenza zombini kwiYouTube nakwindawo ekuyo kwiiMephu
Enkosi kakhulu ku-Berllin kunye ne-Dacmx ngoncedo lwakho
alvaro sanchez paule sitsho
Masibone ukuba ukhona umntu onokundinceda.
Ndine-3gs ye-iphone enenguqulo 3.1.2 kwaye ndalayisha i-cidya kwaye isebenza ngokuchanekileyo.
Ndizamile ukufaka i-Ibluetoth app kwi-cidya kwaye yafakwa kodwa xa ndiqhuba inkqubo yandinika impazamo, ndaqala kwakhona iselfowuni ngentambo ye-usb endaweni kwaye ukusukela ngala mzuzu andiqalanga iselfowuni.
Iselfowuni sihlala kwiscreen kunye ne-logo ye-itunes kunye ne-usb cable.I-itune iyayifumana kwaye indixelele ukuba i-Itunes ifumene i-iphone kwimodi yokubuyisela kwimeko yesiqhelo.
Ndingayivula njani iphone ngaphandle kokuhlaziya kuhlobo 3.1.3?
Ngaba ungarhoxisa okanye ucime imo yokubuyisela kwimeko yesiqhelo kwaye iselfowuni ivulwe kwinguqu ebinayo ngokungagqibekanga?
Phendula u-alvaro sanchez paule
Leyo yingxaki yabaqhubi bezibuko le-USB.
Kuya kufuneka usebenzise njengoko kubonisiwe kwisifundo: IREB
Uneenguqulelo ezi-2 ze-mac kunye neewindows
Batshintshe igama kunye nendawo yokugcina izinto
alvaro sanchez paule
Esi sisifundo se-2G
UJonathan Mexico sitsho
Le firmware ilungisiweyo ayindincedanga, ndinempazamo eyi-12, kwaye ihlala ikwimo ye-DFU.Ndivile ukuba akukho nto intsha ngale firmware 3.1.3 intsha, ndibuyile ku-3.1.2 ngcono …… ..
Phendula kuJonathan Mexico
Ukuba ndineenguqulelo zombini kwaye indinika ingxaki kuzo zombini ...
I-oscar gam sitsho
Molo berllin, andazi ukuba uyandikhumbula.
Ndinike i-2g kwintombi yam endiyibekileyo ndibeke zonke iinguqulelo eziguqulweyo kunye nezokuqala zokusebenzisa i-redsn0w kodwa andifumani mqondiso we-Wi-Fi kwaye kuba ikwi-t kwaye andikwazi ukuyenza ngaphandle kwe-cydia njenge Andinalo ikhadi elivela kule nkampani kodwa hayi i-Wi-Fi ilungile kum, nceda usazi isisombululo?
Phendula kwi-oscar gam
Beka 2 umsebenzi kakuhle okoko ndibasebenzisileyo
Yongeza lo mthombo kwi-iphone: "http://fishbone.ge"
Beka le ndawo ukujonga ukuba iyahamba "Push Isaziso soLungisa"
Akukho sisombululo sinokubakho kwingxaki yam, ndicinga ukuba ndiyakuxelela.
Andifumani i-cydia intanethi kunye nekhadi le-movistar kwaye ngokungafaniyo ndikuxelele i-wifi kwaye andinakubeka repo uyasazi esinye isisombululo sokuba kutheni, ungathathi i-intanethi kunye nekhadi kwaye ukuba kunqabile kuya kuba Ukusuka kwipleyiti ye-iphone i-wifi ayenziYinto engwevu ngaphandle kodwa akukho nethiwekhi ivela kwaye ikhadi lindisebenzela lifowuna ngokugqibeleleyo.
ucinga ndicinga ntoni ????
Ewe, inokuba yingxaki nge-eriyali (izixhobo) ???
kakuhle berllin ubuncinci ndiyifumene i-intanethi ukuba ihambe ngekhadi kwaye ndiza kufaka isilungiso sesaziso kwaye ndiza kukuxelela, kulungile
UKUPHUMA KWELANGA sitsho
Ndichithe iiyure ndikhuphela ipsw, ndikhuphele ucofe iqhosha lokushiya ngaxeshanye ne "Buyisela" isitshixo kwi-iTunes. kodwa iyandixelela ukuba i-ipod ayinakukhutshelwa kuba i-firmware ayixhaswanga. Ndingenza ntoni? Ndine iTunes 9.0.3
Molo, unjani, i-firmware ibalasele, Siyavuyisana…. Ndinombuzo omnye.
Ngaba ikhona indlela yokuyivala i-intanethi, kuba itya yonke imali eseleyo kwi-intanethi kwaye andiyiqondi. Enkosi 🙂
Ukuba ikuxelela lonto, kukuba awukayikhuphi iFirmware ye-iphone yakho okanye isikhangeli sakho sitshintshe ulwandiso kwaye ayisasebenzi ipsw.
Kwimeko yesibini kufuneka utshintshe ulwandiso ngesandla
Faka i-SBSettings enokhetho lokukhubaza i-3G kunye ne-Edge.
Ngamanye amaxesha ayisebenzi ...
Molo ndinengxaki ndiyathemba ukuba ungandinceda
Ndine iPhone 3GS yam eyaphulwe kwaye ayivulwanga, kodwa bendinengxaki ekusebenzeni kwefowuni, ndiye ndazama ukuyibuyisela ukuyilungisa emva koko ndenza yonke inkqubo yokuvula kwakhona, kodwa xa ndifuna ukuyibuyisela yandixelela ukuba i-iTunes izakufaka Inguqulelo yamva nje yesoftware (into endizakuhamba ngayo ukusuka kwi-firmware 3.1.2 ukuya ku-3.1.3) kodwa ndiyirhoxisile, emva koko ndazama ukuyibuyisela kwi-iphone efanayo kwaye inkqubo yaqala kodwa okomzuzwana isikrini saya kwimowudi apho Intambo ye-usb iyaphuma kwaye ndizamile ezinye izinto kodwa sele ndingazi ukuba ndenzeni
NCEDA NDOYIKEKILE ANDIFUNI UKUGCINA IPODE NDINETHEMBA LOKUBA UNGANDINCEDA
Ukuqala kwam ukuzama ukubuyisela nge-iTunes, emva koko ndafumana impazamo ngo-1604 kodwa ke andazi ukuba iyatshintsha ngoku xa ndibuyisela andifumani mpazamo, indixelela: i-iPhone ayinakubuyiselwa. Esi sixhobo asifanelekanga kulwakhiwo oluceliweyo.
Ukuba awuyigcinanga ifayile ye-ECID eCydia, awunaso esinye isisombululo ngaphandle kokuya ku-3.1.3 kwaye uyiqhekeze ejele.
Kodwa ngekhe uyikhuphe ...
Awusenakubuyela ku-3.1.2 okanye ngezantsi
I-iphone ikwimo yokubuyiselwa, kodwa yayiku-3.1.2 kwaye andizange ndihlaziye kwanto
Kodwa ngokuhlala kwimowudi yokubuyisela, awunakukhetha ngaphandle kokubuyisela.
Kwaye i-Apple itshixe iFirmware 3.1.2 yokubuyiselwa kwee-3Gs, ke ivumela i-iTunes ukuba ilayishe kwi-3.1.3.
Inye kuphela into onokuzama ngayo, zama nje ukubona ukuba iyasebenza kunye ne-firmware onayo, yile ilandelayo:
-Cinezela iqhosha laseKhaya kunye naMandla e-iPhone, ide icime.
-Cinezela iqhosha lamandla kuphela kude kuphume iapile kwaye uyishiye imizuzu embalwa ukuze ubone ukuba iyabanjwa.
-Ukuba akabanjwa, wenza into enye amaxesha amaninzi.
-Ukuba ayikabambi, uyayiphinda emva kweeyure ezimbalwa
-Kanjalo njalo ukubona ukuba ekugqibeleni iyadinwa kwaye ibuye ibuye
Ndikwazile ukufumana ii-iphone ezi-2 ezi-3G ezifileyo, kodwa kwezinye iimeko khange zisebenzele mna
aah pk enkosi kakhulu
loo ndiza kuzama
kodwa uyayazi into ebendiyenza kwaye xa icinywayo ibonakala ngathi kukukhanya kokukhanya kwaye umgca omnyama omileyo uvela embindini wesikrini.
kwaye ihlala njengophawu lwelona fifi limnyama phakathi
kwaye xa ndicinezela amandla ayanyamalala kwaye yonke into ihleli ithoni emnyama: S: S
Ixesha lokuqala bendisoyika kakhulu kodwa sele yenzekile kum amaxesha amaninzi
Andazi nokuba yenzekile nakuwe?
IMontro yeyiphi inkqubo eluncedo kum ukukhupha izixhobo ngaphandle kokungena kuqwalaselo umz. I-intanethi….
Ispazio fakeApn: Ngale nto ungavimba i-intanethi
Molo BERLLIN UXOLO NDINOKUTHANDABUZA, XA NDISEBENZISA LE SIFUNDO KWI-IPHONE YAM I-2G, XA NDINGAYISEBENZISI NDAYICIMA IYAVALWA, NAKUBA NDIYISEBENZISA NDAYIVALISA AYISAYI KUJIKISWA VALIWE, IZAKUBA YINYE INGXAKI YOKUSETYENZISWA KWE-FIRMWARE OKANYE UNGANDINCEDA, NDIYABULELA KAKHULU.
berllin, ngaba ikhona enye i-firmware yesiqhelo 3.X kune-3.1.2 ye-2G ??? Ndifuna ukuzama enye ukuze ndibone ukuba ndingafumana i-wifi isebenzele mna
Akukho firmware kuba ine-15.000 yokukhuphela.
Nokuba ivela kwisicelo onaso okanye into engalunganga efakiweyo, okanye kwi-Hardware
Ndisese-berllin efanayo, zombini ngo-3.1.2 no-3.1.3 i-Wifi ayisebenzi kum, ngaphambi kokuyihlaziya ibe ngu-3.1.3 bendinento kwaye ndizamile kwaye iWifi isebenza, kungekho namnye kubo ' Andenzi blackra1n nokuba, ngeli xesha andiyifumani iBootNeuter ...
Molweni nebherllin. Enkosi ngegalelo lakho kuluntu lomsebenzisi lwe-iPhone 2G kunye nokuphendula kuzo zonke iinkxalabo ezichazwe apha.
Ndinengxaki encinci. Emva kokuba ndihlaziye i-iPhone yam, ndiyikhuphile kunye nayo yonke into, ndaya kwi-itunes ukubuyisela isipele sokugqibela kwaye andazi ukuba kwenzeke ntoni kuba isikrini simnyama kwaye kukho kuphela iapile enebhari engezantsi kwaye andinakungena nantoni na . Andazi ukuba kufuneka ndilinde okanye kufuneka ndiyibuyise. xa ndiyibuyisela itunes yandixelela ukuba yonke into ihambe kakuhle kwaye xa ndigqiba iphone izakuvela kwiwindow ye-itunes, kodwa ibingathi iyure kwaye akhonto. Ndingenza ntoni? Enkosi!
Mholweni!!! enkosi ngeli siko. isayiniwe !! Yeyesi-2 endiyisebenzisayo! ...
Ndine 3.1.2… ndinengxaki kwaye ndiyathemba ukuba ungandinceda! kwinyanga ephelileyo i-wifi yaqala ukusilela .. ekuqaleni ungayibona imivalo edityanisiweyo kodwa ndathi ndakufika ephepheni lanqamka, yayingumbandela nje wokulinda kwaye iphinde yanxibelelana ... kodwa ingxaki yaqhubeka! Imivalo yokudityaniswa kunye ne-ip ayiphumanga, imaski yenethiwekhi njl. …. namhlanje ayifumani nethiwekhi! nokuba uphambi kweemodem! ... ucinga ukuba le femu ingasombulula le ngxaki kum !! UMNTU !!
kwaye ke!! Ndine 2g .. hahaha…. Sele ndiyenzile yonke into !!! ukubuyisela useto lwenethiwekhi ETC1..HAHA GRAX !!!
Mna montro iphone ayifuni ukundibamba njengoko ndisenza kuba ndifuna ukufaka imidlalo….
Iicarlos ireta sitsho
Molo berlin ndiseMexico kwaye inyani ndiyivulile i-iphone 2g kodwa ndiyenza njani ukuba isebenze kwilizwe lam inethiwekhi itelcel enkosi
Phendula i-carlos ireta
Namhlanje ndigqibe kwelokuba ndizame enye inethiwekhi ye-Wi-Fi, ebingeyiyo eyasekhaya kwaye ndimangalisiwe ukuba indidibanisile kwaye ndizamile eyasekhaya kwaye ayizuku… ingaba yintoni iberllin? Ndenza ntoni okanye ndiqwalasele ntoni ukuze isebenze kum ???
Ityala lam liyafana ne-victordelolmo777, ungandicacisela ukuba akunguye umnqobi ???
UAbhigali Leal sitsho
Molweni nge-navabest. Zama ukubona ukuba kwiinkcukacha zenethiwekhi ye-WiFi ongakwaziyo ukuqhagamshela kuyo, inethiwekhi ayishiywanga okanye ibhokisi ethi DHCP ikhethwe kwidilesi ye-IP (eyokuqala ngasekhohlo). Kungenzeka ukuba idatha yenethiwekhi ayichanekanga apho. Kuya kufuneka uzame ukuyisusa kwaye uyongeze kwakhona, kuba ubukwazi ukudibanisa kwenye inethiwekhi ye-WiFi. Ndiyathemba ukuba iyanceda.
NdiseVenezuela kwaye ndine-2G iPhone kwaye ndiyayihlaziya kuhlobo lwe-3.1.3 kwaye khange ndibenangxaki kwinethiwekhi.
Phendula kuAbhigali uLeal
I-Navabest, ukhe wazama ukubona ukuba inethiwekhi yakho yasekhaya ye-Wi-Fi ine-Intanethi? Ngamanye amagama, inokuba unxibelelana nenethiwekhi kodwa loo nethiwekhi ayinakho ukufikelela kwi-Intanethi. Zama ukunxibelelana nenethiwekhi ukusuka kwesinye isixhobo. Andazi ukuba kwenzeka ukuba i-iPhone ayisiyongxaki kuba unokunxibelelana nenye inethiwekhi
Ewe ndinokufikelela kwi-intanethi kuba ndinxibelelana neLaptop kwaye andinangxaki, kwaye ukusuka kwi-iPhone sele ndizamile ukuyilungisa nangayiphi na indlela kwaye ayinxibelelani nam ... iqwalaselwe? Ayinamsebenzi ukuba yeyiphi ip endiyikhethayo kuba akukho nanye ndinonxibelelwano
UKaiser Z sitsho
Ewe ukhona umhlobo wam, kokokuqala ukuba ndikhuphele isiko kwiphepha lakho, ndiyabona ukuba uneereferensi ezilungileyo kakhulu, isiko alindenzeli mna, lelomhlobo one-2G, ndine-3Gs ngelishwa ndilayishe kwi-3.1.3 ha, kodwa ke, yayisemthethweni kwaye andilahlekanga kakhulu, enkosi ngomsebenzi wakho wokwenza eli siko.
Phendula uKaiser Z
Molo, unjani, umbuzo, ndingayifaka le nto kwi-iPhone engazange ibe neJailbreak ???
Ngaba kuya kuba njalo kwi-iPod Touch? Ndiyathetha, ukuba ayikhange iphulwe, nokuba uyibuyisela nge-fimware yayo eyiyo (ye-iPod hayi i-iPhone) iya kusebenza, okanye ikhona enye into oyifunayo? Enkosi ngexesha lakho 😉
Andazi ukuba uyisombulule, ukuba awukayisombululi:
-yibeke kwimodi ye-DFU:
Thatha le khokelo kweli phepha
Ngale firmware i-2G sele ivuliwe kwaye ikhutshiwe
Ukuba yi-iphone 2G ukuba unako, kuba le ye-2G
Ngezinye ii-iphone okanye ipod kuxhomekeke kudidi
Zama ukunqamula uqhagamshele kwi-Wi-Fi amaxesha amaninzi kuseto
Ihlala isenzeka ukuba i-IP ye-wifis ayibambi kakuhle, kungoko ilahleko yonxibelelwano.
Ungayilayita uyicime kaninzi de ube ubona ukuba iyabanjwa.
Kuya kufuneka ube nomonde, ukuba ingxaki yile ukusukela ekugqibeleni i-wifi ihlala
Berllin, enkosi! Ndizakuyijonga, bendisele ndilahlile ukuba ndilahlekelwe sisivumelwano.
Into kukuba indidibanisa kwaye ndifumana i-IP, kodwa xa ndingena kwisicelo iyandixelela ukuba ifuna uqhagamshelo lwe-Intanethi kwaye andixhunyiwe kwinethiwekhi kwaye ngoku, ndingena kuseto, inethiwekhi kwaye ndixhumekile. Andiqondi!!!
Sele ndizamile kwaye akukho nto…. Ndiqala ukukrokrela ukuba yingxaki yangaphakathi okanye ye-eriyali…. kunjalo, enkosi !! 🙂… sele ndikhuphele ifemu. Ndilinde nje ukubona isicatshulwa senkqubo eqhekekileyo 3.1.3 ... enkosi ngoncedo lwakho!
Ewe, akukho nto, ibisoloko indinika impazamo eyi-14, ndizamile ireb kunye nezo zinto kwaye akukho nto, ihlala inempazamo efanayo, ndiza kuyivuselela kwi-3.1.3 esemthethweni kwaye ndiza kwenza ijele, bekungekho enye indlela choice
ungakhathazeki ngaleonardo malunga nokusuka kwi-cydia oyifakileyo i-app 3.0 okanye u-3.1 ngokuxhomekeke kwifirmware yakho ukuqala kabusha i-iphone kwaye sele ilungelelanisa ii -apps ozifunayo kwaye ngaphandle kwezithintelo zide zaqhekeka ngaphandle kokwenza nantoni na eyenye imibuliso ..
Ndafaka iPush Izaziso zoLungiso ezivela "http://fishbone.ge" kwaye andikwazi ukungena kwi-Youtube. Ndicinga ukuba yingxaki efanayo ukuba andikwazi ukufikelela kwiakhawunti yam ye-Yahoo! Ndingayisombulula njani?
ukufumana iividiyo kwi-iphone yam njengoko ndinako ...
UKagamine Ranma sitsho
Wolas berllin imibuliso evela eMexico …… kuba andikwazi ukufaka isiko lakho 3.1.3 okanye ukuyizama nge-IREB ihlala indiphosela isiphoso se-14… sele ndiyizamile ngenye i-PC ngokufanayo…. kodwa ndikwazile ukufaka isiko eli-3.1 kwaye khange linike ngxaki …… imeko yile… i-iPhone 2G endinayo ine-modem ye-firmware 04.05.04_G kwaye ayisoloko ifuna ukundinika uphawu lo «Akukho Nkonzo» Ndiyitshintsha i-sim ye-movistar kum ukuba ivele ngokufanayo. Nditshintsha enye iTelcel Sim ngokufanayo…. Ihlala indibeka "akukho nkonzo" ndifuna ukwazi ukuba yintoni ingxaki ??? Sele ndizamile nge-bootneuter (ndicinga ukuba yile nto ibizwa ngayo) ukuyivula kwaye akukho nto konke konke ... kwaye bathi ingxaki ingavalwa yi-IMEI iyakuba yinyani? kukuba ndiphelelwe lithemba ... ... ... besele ndenza njalo kwaye ndihlala ndinika "akukho nkonzo" ndicela umntu andincede TT
Phendula uKagamine Ranma
Ngonxibelelwano endingenalo intanethi, andifumani naluphi na ulwazi kwinethiwekhi kwi-router kunye ne-DNS kunye nale ndinayo, ndiyenzile, ndiye ndabona ukuba ngaphandle kwale bendiyikhankanyile, inokuba yintoni ngenxa endinokuyenza ????
UDaniela h sitsho
Enkosi ngolwazi Berllin !!! Isebenzile kum !!
Phendula kuDaniela H
Molo berllin kuqala ndikuxelele ukuba uyintanda !! Kwaye umbuzo wam pekeña kukuba ndenza onke amanyathelo afanelekileyo kwaye awundiniki ngxaki, kuphela xa ndibuyela kwimenyu ye-iTunes kwaye ndibone ukuba loluphi uhlobo I Ndinayo, ndino-3.1, ingathi ndenze yonke into ngokuchanekileyo kodwa ke andiboni ukuba itsibe yaya kuguqulelo 3.1.3, xa ndiphinda ndingena kwi-itunes iyandixelela ukuba ndiyaqwalasela ngotshintsho lokugqibela ebendinalo okanye ukuba ndifuna ukwenza entsha, ndiyinika Ngexesha lokugqibela bendisoyika ukulahlekelwa lulwazi ebendinalo, mhlawumbi kufuneka ndilunike olunye, andazi ukuba kutheni ukwenza yonke into kakuhle ngaphandle kwengxaki Ndiyayifumana loo nto, xa okokugqibela ukuyifaka ku-3.1 yeyona ndinayo ngoku ndiyenzile ngencwadana yakho kwaye khange indinike ngxaki.
IBerlin ungandinceda ngesifundo ukwenza izaziso zokutyhala kwi-iphone 2g kunye ne-firmware 3.1 kodwa ayisiyonto yokunyanzela ugqirha okanye yokulungisa kuba akukho namnye ondikhonzileyo enkosi kakhulu kwangaphambili
Oko kuyabangelwa kukuba i-IP yenziwe, kodwa ayisiyiyo eyokwenyani. Jonga ukuba ngaba i-IP iyinyani
Nge-SSH, ukubadlulisa ukusuka apho ugcine khona kwikhompyuter nge-WinSCP (windows), eCyberduck (Mac), kukho iinkqubo ezininzi ...
Andibazi abanye ...
Uxolo kodwa andazi ukuba ndingajonga njani ukuba uyayilungisa okanye hayi, kwaye ukuba kunjalo, kufuneka ndenze ntoni ukuyilungisa? Kuba kukho iinethiwekhi apho ndithe ndadibana njengoko bendivele ndibeka enye inkcazo kwi-DNS kunye neRouter engandibonisi idatha, ngelixa kwinethiwekhi endingenazo iingxaki zonxibelelwano endibonisa zona.
Zama ukwenza yonke inkqubo kuyo ukuze ubone ukuba isonjululwe na
Yiyiphi inkqubo yeberllin ???
Ndifuna ukwenza iJailbreak kwakhona kwasekuqaleni kwakhona
Enye into enokwenzeka:
molo ndim kwakhona haha, umntu ovela ku-aki uye wanengxaki ne-wifi ye-iphone kwaye wazama yonke into ngaphambi kokuyithetha nasemva kokuhlaziya le femu. Ngaba ingxaki isonjululwe? ... Ndisathandabuza ukuya kulinga kwaye andifuni kuphulukana nayo yonke into !! ... ndeva malunga nokwenza into kakuhle kodwa xa usenza i »buyisela» ufuna iWIFI ukubuyisela yonke into! .. NCEDA NCEDA !! Ndiyabulela kwangoko!!
Enkosi uBerllin ngekhonkco eliya kwi-CF 3.1.2. Inyani yile yokuba ndagqiba kusuku olungaphambi kwehehe! Uhlaziyo olu-3 lokugqibelela oku-3.
Sele ndiyenzile intolongo, i-CF yokuqala ndiyibekile yayingu-3.1.3 ndabeka u-3.1.2 kwaye ndinengxaki efanayo. Kwaye i-blackrain sele ndizamile ukuyenza kwaye yandinika impazamo, andiyifumani imifanekiso oyibekayo ekufuneka iphumile kwaye ndizamile nge-USB aliqela kwaye amatyeli aliqela
berllin ukufumana iividiyo ezivela kwi-iphone yam ukuba le cycorder imbi….
Ukuba awuyitshintshanga indlela yokubakhupha ngeSSH yile:
var / mobile / imidiya / iividiyo /
aaahahahahahaah ndizakuphambana ,,, ndiyikhuphele i-firmware kwaye bahlala beyifomathi ye-winrar ,,, ndiyazivula kwaye i-firmware ayibonakali, kuphela ziifayile ezaphukileyo ... kudala ndalikhuphela kwi-firmware kwaye ndiyikhuphele kakuhle kodwa ngoku mna Iphuma nge-winrar ,, ndizamile ukutshintsha i-zip ... ye .spw kwaye iseyile winrar, ke ngoko i-iTunes ayiyiboni, ndenza nje, isisombululo nceda, , wam ke ...
Molo ngokuhlwa, bendifuna ukubuza ukuba ingaba le firmware uyenzileyo isebenza ipod touch 2G ngenguqulo 3.1.3, enkosi kakhulu.
Ndifumana impazamo 14.
Ngoku andazi ukuba ndiza kwenza ntoni cajeta
molo, uthini nge-berllin, hey, jonga, kwaye ndikwazile ukuvuselela i-iphone 2g yam kodwa ngelishwa xa ndizama ukufaka i-firmware yakho andikwazi kwaye iyandishiya ndifile kwaye kufuneka ndiyibuyise ngokwesiqhelo kodwa ayiyazi
Molo, ndinombuzo okanye impazamo. Ndine-3GS ye-iPhone ngentambo kunye ne-iTunes, ayizukundivumela ndibuyisele i-xk ndifumana impazamo eyi-1604. Andikwazi ukuyidibanisa xk andinakudlulisa intambo nge-iTunes kwaye ayindibuzi. sim okanye nantoni na, andinakuyifaka okanye ndiyibuyisele, ngaphambi kokuba k le yenzeke kum kreo k wayenenguqulo 3.1.3 k ayifake ngengozi. Sisiphi isisombululo osinika sona?
Impazamo ye-1604 ayiphumanga ngaphambili.
Enkosi bherllin wam othandekayo ungutitshala, uyazi ukuba ndinesizukulwana sokuqala se-iphone eyi-8gb ndiyivuselele nge-3.1.2 oyipapashileyo kwaye yandisebenzela. Kodwa le ihlala indinika impazamo eyi-14 kwaye ndiyigqithisa i-ireb njenge-50000 lamawaka aphindwe kabini kwaye akukho nto ishiyekileyo nje ukuba iqale ukubuyisela kunye nempazamo ye-14.
Ukuba ungandinceda, ndiyabulela kakhulu.
I-Bellin ikhona indlela yokuthumela imifanekiso nge-iphone 2g eno-3.1.2 njengomyalezo….
I-Bellin Ndidinga uncedo lwakho, ndiyakuxelela ukuba ndihlaziye i-iPhone 2g yam ibe ngu-3.1.2 kwaye iWIFI iyekile ukusebenza ke ndaye ndagqiba kwelokuba ndiyihlaziye ibe ngu-3.1.3 ukuba akunakwenzeka ukuba nditshintshe izibuko kwaye akukho nto kunye nezinye izinto ezenzekayo namhlanje ngoluhlobo ndithathe isigqibo sokubuyela ku-3.1.2 kwaye kwakhona andinayo iWIFI, ndiyicime ndayixhuma kaninzi, ndicime iphone ndayivula amatyeli aliqela… Ngaba uyazi enye into endinokuyenza ukuze ndenze i-WIFI isebenze? Enkosi ngoncedo lwakho.
Berllin Izimvo zangaphambili malunga ne-WIFI nceda.
@ BERLLIN: molo okoko ungakhange uzihluphe ngokuphendula imibuzo yam malunga ne-firmware yakho kunye nengxaki ye-wifi, ndiza kuthatha ingxaki ndikuxelele ezinye izinto. sele ilayishwe kuhlobo 3.1.3, Khange ndiyisombulule ingxaki yam nge-wifi ... (bendiyirhanela), okwesibini, i-firmware yakho yenziwe kakubi, kwaye ngaphandle kwabantu abafumana iimpazamo ezingapheliyo, kungenxa yakho ngokuqinileyo. yenziwe kakubi, okanye iitunes zakho azikho mva. Kwimeko yam yayiyi-firmware yakho, qala uye kwi-dfu, buyisela, kwaye ndinempazamo eyi-1600, ndadlula ireb. kwaye iimpazamo zihlala zivela, ndaye ndagqiba kwelokuba ndenze eyam, (HAYI BAKHO ABAHLOBO BAKHULU! ZAMA) kwaye WENZE !! Ndine-3.1.3 kodwa ngaphandle kwento kuba ndingenayo i-wifi ... ndincoma ukuba ujonge i-firmware yakho ... MIBUZO! ...
Molo eBerlin, unjani? Jonga ndine 3gs v 3.1.3 abandizise kuzo from atyt, ndizamile ukuvula ibhendi ngoku andikwazi nokungena kwimenyu, iyandibuza nge sim yoqobo okanye Ukuyivula.I-jailbreak ndiyabulela kakhulu i-portua tencion kwaye ndiyathemba ukuba impendulo inethemba
Uncedo kwi-iphone yam endiyifumanayo Amakhadi e-sim afakwe kule iphone akabonakali exhaswa, kwaye inyani kukuba e-Ecuador akukho mntu uyazi ukuba yintoni ingxaki, bandixelela kuphela ukuba isantya siphezulu kakhulu kwaye nezinto ezinjalo ukuba umntu Uyayazi indlela yokuyibuyisela kwaye uyiyeke njengangaphambili ngaphambi kokuba ndiyixabise ... i-iphone yam ngama-32 g. 3gs uncedo ngu fa
hey ligalelo kakhulu kuphela ukuba andinakukwazi ukusebenzisa i-wi-fi indixelela "ngaphandle kwe-wi-fi"
Ndingavuya kakhulu ukuba ungandinceda kuba andinalwazi lokuba kutheni ndiyifumana. Ndine iphone 2g bendinayo ngo-3.1.1 xa ndiyivuselelayo
EBerlin nceda, uyazi ukuba ndinesizukulwana sokuqala se-iphone eyi-8gb ndayihlaziya nge-3.1.2 oyipapashileyo kwaye yandisebenzela. Kodwa le ihlala indinika impazamo eyi-14 kwaye ndiyidlulisa nge-ireb ngathi ngamawaka ayi-50000 amawaka kwaye akukho nto ishiyekileyo nje ukuba iqale ukubuyisela kunye nephutha le-14.
Ndidinga uncedo. Ndiyilandele le khokelo kwaye indinika impazamo ye-14 kwaye, emva kokuyamkela, i-iTunes ithi ibone i-iPhone kwimo yokubuyisela kwimeko yesiqhelo kwaye kufuneka ndiyibuyisele. Isimboli ye-Itunes iyavela kwiscreen se-iPhone.
Ndingenza ntoni? Ndizamile kumazibuko ahlukeneyo e-USB nditsho nakwenye ipc, kodwa kusoloko kukho impazamo efanayo… Ndilangazelela.
berllin ukuba ndifuna ukubuyela kuhlobo lwangaphambili lwe-iphone osea 3.1.2 inokungandivumeli… ..
Molo, ndicinga ukuba ndenze impazamo, ukuba ungandinceda, ndihlaziya i-iPhone 2G ukuya kwi-3.1.3 esuka kwi-iTunes ngqo kwaye ngoku indixelela ukuba ndifake ikhadi lomqhubi wakho ukuze ayisebenze, ngale nto inokusebenza? Enkosi
UBerllin uyathandabuza. I-iphone yam ye-2G ayiphumelelanga ibhetri okoko ndaphucula i-3.0. Ikhuphela ngokukhawuleza kakhulu. Le firmware ilungisa le ngxaki. Sele ndiqinisekisile ukuba ayisiyongxaki yezixhobo (nditshintshe ibhetri entsha)
Igqibelele, kunye ne-iphone 2G. Ndiyabulela kakhulu
Molo, ndine-iphone 2g ene-firmware 2.1, xa ndisenza yonke into ethethwa yiposi, ingaba izakusebenza ngokuchanekileyo okanye kufuneka ndihlaziye i-baseband ngandlela thile?
Busuku benzolo. Ndine-iphone 2G endiyihlaziyeyo i-firmware ukuba ibe ngu-3.1.3 nge-itunes, ndingayinanzi imiphumo. Ndizamile ukukhuphela i-firmware eguqulweyo ebonakala phezulu kweli phepha, kodwa nje ukuba ndicofe ku-SAVE, iwindow iyanyamalala kwaye akukho nto ikhutshelweyo. Ndiyabulela ukuba ungandinceda okanye uthumele enye ikhonkco yokukhuphela.
sergio pacheco sitsho
Uxolo !!! Ndinengxaki, i-iphone yam ibinayo kwi-3.0, ngequbuliso i-wifi iyekile ukusebenza (khange ibone iinethiwekhi okanye nantoni na), kunye neefowuni ezingenayo azange zingene kwaye imiyalezo ize kum njengeeyure ezi-5. Emva kwexesha ..., ndiyilayishe ku-3.1 ukubona ukuba ilungisiwe kwaye ibingafani naleyo, bendine-backup ye-iPhone yam eyayiyi-3.0 kwaye yayisebenza kakuhle kwiminxeba nakwimiyalezo, kodwa ngoku kuseto i-wifi sele ivele (NGAPHANDLE kweWIFI) Ndithetha ukuba andinakukwazi nokukhangela iinethiwekhi ... .. Ndifuna uncedo lwakho, ndingalixabisa kakhulu, ndikushiyele imeyile
Phendula kwi-sergio pacheco
Wendy ukuhambelana namanye amagama sitsho
Molo, ndine-iphone ye-8gb, ndikhuphele i-firmware ndizama ukulandela, onke amanyathelo akho, kodwa ihleli ifile, ibeka kuphela umzobo wentambo kunye ne-itunes, kwaye andinakwenza enye into, kwaye ndizamile ndiyibuyisele nge-itunes, kodwa ayindishiyi ne-vodafone sim yam (yayisimahla) ndithini? Baye bandinika le iphone kwaye ndisebenzise imali engaphezulu kunokuba bendiyithengile, nceda undinike intambo
Ndizakuyizama emva koko ndiza kukuxelela
Ndidinga uncedo olukhawulezileyo nceda. Ewe, sele ndiyivulile kwaye ilungile kodwa inxalenye yesiginali yefowuni ibonakala ngathi ifuna kwaye andinakukwazi ukwenza iminxeba, baya kuyazi ukuba ingayintoni kwaye bangayilungisa njani
Akukho mntu unokukunceda kuloo nto, kuba nguwe kuphela onokuyigcina kwaye yingxaki kwikhompyuter yakho
Inokuba uqala ukuba nengxaki yehardware nge-iphone yakho
buyisela ku-3.1.3 kwesi sifundo
Wendy ukuhambelana namanye amagama
Yibeke kwimodi ye-DFU:
kwaye emva koko wenze oku:
uyiqale kwakhona amatyeli amaninzi, cima i-3G kwaye uzame kwakhona
Ndicela undincede meeee eBerlin nceda, uyazi ukuba ndinesizukulwane sokuqala se-8gb iphone, ndiyivuselele nge-3.1.2 oyipapashileyo kwaye yandisebenzela. Kodwa le ihlala indinika impazamo eyi-14 kwaye ndiyidlulisa nge-ireb ngathi ngamawaka ayi-50000 amawaka kwaye akukho nto ishiyekileyo nje ukuba iqale ukubuyisela kunye nephutha le-14.
Umbuzo wam kukuba i-firmware iyasebenza na kwi-IPOD touch esele inenguqulo 3.1.3 (7E18), kodwa ayiphuli.
Molo, unjani? Phambi kokuba ndibaneFirmware 3.1.2 kwaye i-iPhone yatshisa kakhulu ngokusetyenziswa okunzima, emva koko sele ndibeke le firmware kuyo kwaye iyeka ukufudumeza, ibilungile, kuphela ngoku ibhetri ihlala incinci kakhulu, itya kabini ngokukhawuleza kunangaphambili… uyazi ukuba ingaba yintoni ??? okanye ukuba kukho isisombululo? Ndingayixabisa kakhulu 😉
Kulungile, isifundo, sele ndilahlekile i-iPhone 2G, ayilunganga konke ukukholelwa loo mfo.
enkosi ngegalelo !! lisebenza ngokugqibeleleyo
uBerllin undithengele iphone 3g ndithetha ukuba nditshintshe i-2g kodwa ndinengxaki kwaye ndizama ukubeka i-3.1.2 3g kuyo kwaye andifumananga siginali ndazama nge-blackweather kwaye akukho nto ndinokuyenza ngale nto. ..
hehehehe impazamo eza nezisombululo ndiyitshintshe intambo ye-USB hehehehe isebenze ngokufanayo de kwafika kum ukutshintsha ikhebula le-USB kwaye ndibuyise kakuhle ngaphandle kwengxaki, xcierto berlyn ungoyena uphezulu! Enkosi!
UBerllin kuphela kwento endinokuyenza kukubulela! enkosi!
UBerllin ... akukho nto ingakumbi yokubulela kunye nokuninzi!
Molo, mhlobo wam, yitsho nje ukuba unokuba yingcaciso ngeSpanish ukuba unokunika inkcazo engcono kunama-nobatos njengoko ndiqonda
Ndingayivuyela kakhulu, jonga le yi-msn yam elmejorchico145@hotmail.com
Molo. Kudala ndizama ukuvula iphone 2g. Ndizamile iitutorials ezininzi, ii-firmwares ezininzi apha, yonke into ihamba ngokugqibeleleyo ngaphandle kokukhutshwa. Ndisenomsebenzisi AKUFUMANEKI kunye ne-04.05.04G baseband. Umntu othile wakwazi ukundixelela ukuba andinakho ukuyikhulula kuba ndihlaziye ngokuthe ngqo kuhlobo 3.1. Ngaphandle kokuhamba ngo-2 injalo? Ngaba umntu unokundinika isandla?
Enkosi kakhulu kwaye ndiyavuyisana nawe ngeForum intle kakhulu!
jonga uhlaziye i-iphone 2g kwaye ayibambi siginali sele uyifakile sn0wbreeze_v1.3_OS3.1.3_berllin_iPhone 2G.ipsw kwaye ayibambi uphawu lokuba ndiyanceda enkosi
UJavier Paredes sitsho
Heyyyyyyyyyy, ngaba umntu angayilayisha kumlilo osasazo kuba andikwazi ukukhuphela kwi-RS okanye kwi-MU, nceda rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Phendula uJavier Paredes
Kulungile ndikhuphele yonke into kwaye xa ndicinezela ishift kwaye ndibuyisela ibhokisi ndiyibeka, kodwa ndifumana impazamo, indixelela ukuba i-firmware ayihambelani…. Ngaba umntu othile angandinika isandla, ENKOSI NGAPHAMBILI KWABANTU
Molo, ndiyilandele yonke imiyalelo kwileta kwaye ndiyikhubaza i-wifi, ithi "ngaphandle kweWIFI" apho uyenza khona okanye uyikhubaze kwimenyu ngokubanzi, kufuneka ndenze ntoni ukuyivumela kwakhona? nceda nceda
Ndineengxaki ngale nxalenye:
Vula i-Cydia, hlaziya i-Cydia installer kwaye ufake i-PKGBackup ukubuyisela usetyenziso lweCydia ngo "Buyisela", oku kuya kuthatha ixesha kwaye kuya kuxhomekeka kwinani lezicelo ezifakiweyo.
khuphela i-pkgbackup ngaphambi kokuhlaziya i-iphone kwaye yonke into igqibelele ngoku ndifuna ukuyikhuphela kwakhona ukubuyisa idatha kwaye andazi.
Ndinonxibelelwano olwenziwe ngegama elithi pkgbackup lelo lokuba ndiyenzile ngaphambili
ukuyikhuphela kwakhona kwi-cydia ithi THENGA ukuba kufuneka ndiyithenge ngoba?
UJorge G. sitsho
molo nceda ndifuna uncedo oluncinci ... hlaziya i-firmware yam ukusuka ku-3.1.2 ukuya kwi-iOS 4.0 imodeli ye-3.1.3 kwi-iphone 2g yam engavulwanga, Umbuzo wam, ndithatha iifoto ngekhamera yoqobo ye-iphone, ngekhamera yobungqondi okanye nge nasiphi na esinye isicelo sokuthatha iifoto, kodwa andazi ukuba zirekhodwe phi, ndiyazikhangela kwi icon yeFOTO kwaye akukho nto ivelayo, ndingena kwi-IFILE ndiye kwiVAR / MOBILE / MEDIA / DCIM / 100APPLE kwaye akukho nto ayiveli, akukho sithombe, ungandixelela ukuba kuqhubeka ntoni. Nokuba ndithatha iifoto COFA izandi, ukubonwa kuqala kuyabonwa kodwa azirekhodwa ??? Ndiyathemba uncedo lwakho, enkosi
UJorge G. ukusuka eVenezuela
Phendula jorge g.
Khange indincede, bendinayo ngenguqulelo ye-iPhone1,1_3.1.2_7D11_berllin_Restore, kwaye xa ndiyokuyihlaziya, khange indincede, ndenze yonke into kwaye akhonto, ekugqibeleni ndadinwa ndabuya ukubuyisela ingxelo yangaphambili.
Molo, bendifuna ukukubuza, ndine-American 2G iPhone, ukuba ndiyahlaziya… ndizokwazi ukuyivula ngaphandle kokuba nekhadi le-AT & T? Enkosi.
David, ukuba unyanisile!
I-Cydia ayiqali! , Yonke into ifakwe kakuhle!, ndine-iphone 2G nayo yonke into efakwe ngokuchanekileyo ngaphandle kwengxaki ... yonke into isebenza kakuhle ngaphandle kweCydia ... xa ndiyisebenzisa, ihlala nje "icinga" kwaye ihlawulisa i-approx. 1 umz. kwaye iyayeka (sele ndiyizamile amatyeli aliqela kwaye ihlala isenza njalo nakum).
Ndizamile ukukopa i-cydia.deb (ngeDiskAid) kwaye ndiyibuyisele kwakhona, i-PEEEROOO ... andinakho ukufikelela kuyo ngeTheminali, kucacile kuba ndifuna ukuyifaka kwiCydia ...
Ngaba ikhona enye indlela yokufaka iTheminali ngaphandle kweCydia?
Ungayifaka iCydia kwi-iPhone?
Nasiphi na isiphakamiso?
Imibuliso kuzo zonke iPhonemaniacs!
Ndinengxaki efanayo ye-DAVID, i-cydia ihlala ilayisha kwaye iyayeka, ndingathanda ukwazi ukuba kwi-iPhone 2g akusekho customFirmware, zininzi izicelo ezisebenza kuphela ngeFirmware ngaphezulu kwe-4.0 kwaye andiboni Izimvo kwinto ekhoyo
Kulungile, ndiyathemba ukuphendula ngokukhawuleza xa ixesha lakho livuma
Sele ndifumana isisombululo:
Ukufakela kwakhona i-cydia Manual kufuneka ubeke ezi fayile ze-deb kule ndlela ilandelayo ye-iPhone (ndisebenzise iDiskAid kwaye iyenza ngokugqibeleleyo)
var \_ ingcambu \_ iselfowuni \_ media \_ Cydia \_ AutoInstall
Ukuba awunayo ifolda ebizwa ngokuba yi-AutoInstall, yenze kwaye ubeke iifayile ezi-3 apha. ( http://rapidshare.com/#!download| 990tl3 | 389454310 | Cydia.zip | 692)
Xa ugqibile, qala ikhompyuter yakho kwakhona.
Ukuba ukuqala kwakhona akusebenzi emva koko, buyela kwindlela efanayo kwaye ushiye kuphela iCydia.deb
Ndiyathemba ukuba iyakusebenzela!
Imnandi kakhulu kwi-iPhone 2G ene-3.0 ndaya ku-3.1.3, bendifunda iintsuku ezi-2! Namhlanje ndizolala ngoxolo lol! ENKOSI!!!
Molo, ndimtsha koku, ndine-iPhone 2g V 1.1.4 Ndifuna ukuyivuselela kuhlobo 3.1.3, kuyimfuneko ukuba ne-iTunes kwi-V 9.0.3 okanye ndingayenza nge-iTunes 10.1 kwaye ukuba uhlaziyo alusebenzi njengokuba ndisenza ukuyibeka njengoko yayinjalo kuba andifuni ukugcina iselfowuni engasebenziyo ngenxa yeempendulo zakho.
UJavier ndiza kukwazisa ukuba isebenza ngokungazi, umntu apha endlwini yam waqala ukwenza nokuhlaziya i-iPhone yam kwaye andinakukhetha kodwa ukuzama ukubona ukuba iyasebenza. Ukuba iyasebenza ndizokwazisa s2
EMª Angeles sitsho
Okokugqibela bendizakuvula i-jailbreak kwi-iPhone 4 yam.
Inqaku lelokuba wayesekwinyathelo lokuqala, ukubuyisela, wenze konke, uyibuyisile kwaye ekugqibeleni kwe-Itunes wandixelela ukuba i-iPhone izakuqala ngokutsha kodwa ngoku ayiyiboni iphini kwaye yenza kuphela iminxeba engxamisekileyo !!!
Ayindiniki ukhetho lokubuyisela okanye nantoni na. Ndifuna nokulila ...
Ingaba Ungandinceda Nceda ???
Phendula Mª Angeles
Molo, Angeles kuya kufuneka ubeke i-iphone 4 yakho kwimowudi ye-DFU yokulandela la manyathelo
1) -Vala iphone yakho.
2) - Yidibanise nePC.
3) -Ufanele ngoku ubambe iqhosha laseKhaya kunye neMandla / neQhosha lokulala ngaxeshanye imizuzwana eli-10.
4) -Emva kwemizuzwana eli-10 ukhulula amandla / iqhosha lokulala kwaye uqhubeke ucofe iqhosha lasekhaya ngaphezulu okanye ngaphantsi kwemizuzwana eli-10 + de kube iTunes iyamkele.
5) Ngala manyathelo unayo i-iphone yakho kwimowudi ye-DFU ngoku uya kuqhubeka ukhangele isiko (Modified) fimware esele uyikhuphele kwaye unike isitshixo seShift kwaye ngaxeshanye kwi-iTunes iqhosha elithi ukubuyisela liya kuvula ibhokisi apho uqhubeka ukhangela i-fimware yakho yesiko esele ikhutshiwe kwaye uyinike ukuba yamkele kwaye iya kuqala ukuvuselela i-s2 🙂
Imibulelo emininzi!! Yonke into isebenze ngokuchanekileyo kwaye ndisaqhuba ngefirmware enikezwe nguBerllin !!! Kuphela ukuba ndilahlekelwe lulwazi lwam kuba ekuqaleni i-iTunes yayingasamkeli isixhobo, yiyo loo nto ndingakwazanga ukwenza isiphelo esihambelanayo ... ndisese ... ndonwabile ... ndiyifumene i-VIDAAAA yam !! imibulelo emininzi!!!
NGOKUGQWESILEYO !!!!! Ndiqale ndasebenzisa ireb ndayibeka kwi DFU mode ndavula itunes ndafaka isiko and perfect besele ndiyikhupha iphone 2g enkosi
Ngaba le jailbrake isebenza nge-iTunes 10.1 okanye ngaphezulu? kuba andikwazi ukufaka i-9.03, ndingayenza njani?
BAHLOBO, NDINAKUKUNCEDA …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. .1 kwaye uyikhuphele njengoko bane-redsn0w ezantsi qhagamshela i-iphone yakho kwi-pc okanye kwi-laptop yakho !!!!! okoko ikhompyuter iyifumene ngaphandle kokuqhawula intambo ye-usb uyicime emva koko uvule ukhetho lwe-redsn3.1.1w sandran
I-DFU INTO YOKUBA BAKHETHE UKUBA BANYE BAMKELELE UKUQALA
Imizuzwana emi-3 i-lugo yamandla ngaphandle kokukhulula imizuzwana eli-10 ekhayeni kunye namandla ngaxeshanye
emva koko khulula amandla. !!!! kodwa hayi ikhaya, iredsn0w iyilele inkqubo yabo kuba ikwi-DFU ISIKRAYI SIBUYA KUMNYAMA BAVULA IITUNES ZABO !!!!!! kwaye banika ishifti, bakhetha ukubuyisela kwaye bakhethe isiko labo firwire kunye ne-liosto ndlela ntle kwimpazamo ye-1600 njl njl
imeyile yam yile sombi19@hotmail.com Ukuya kuthi ga ngoku ndinokukunceda ndineminyaka eyi-3 yamava kule
Emva kokwenza yonke le nkqubo, andifumani ndlela yokuvula, ndingenza ntoni?
Akukho khetho lokuvula. Xa igqiba ukuyifaka sele ihlaziyiwe kwi-3.1.3 kwaye ikhutshelwe nawuphi na umsebenzisi
Ukuba kuyinyani kude kube emva komhla we-10 ndizama, kodwa ngoku ingxaki kukuba andinawo umqondiso, andazi ukuba kutheni okanye kutheni kodwa ifowuni ayinanethiwekhi kwaye ifowuni enamachaphaza ibonakala kwikona ephezulu ngasekunene. uyayazi ukuba yintoni?
umhlobo wam pau ndikuthumelela imeyile ndiyathemba ukuba impendulo yam kwingxaki yakho iza kukunceda
Ndiyathandabuza ukuba ungandinceda kule teema ukuyifunda:
Ngenye imini bendizama ukulungisa ingxaki nge-iphone 2…. Emva koko ndibeke inaliti ukuyiqala ngokutsha.besele ndiyenzile amaxesha amaninzi.kuthe gqi iphone iyekile ukusebenza. Ekugqibeleni, ndaya kwi-Itunes. Ndayibuyisa. Liisto. Ewe, ihlala injalo. Kwakhona amaqhosha esandi esifanayo awasebenzi. Lowo ucima iTampooco …… iBroow Qe Haago ndibukele iiTutos zakho kwaye ziziSillillos kwaye ndicinga ukuba ungandinceda ngePosi yam Sanchez-885@hotmail.com Nxibelelana nam mzalwana ndifuna ukulungisa le ngxaki.
Ukusuka kwinto oyithethayo, ngokuqinisekileyo ulayishe isikrini sokuchukumisa.
Awusoze wanamathela inaliti naphina kwi-iphone. Kukho izicelo kwi-cydia ukuze ukwazi ukuqala kabusha i-iphone.
Mholweni; jonga, andiqondi; i-jailbraker iya kuba nakho ukulayisha kwi-ipod umzekelo iincwadi zekhompyuter yam? okanye ukulinganisa ukuya ku-3.1.3? Ndinalo "uhlaziyo" kwaye olwam luyi-2g. Umnqweno wam kukuba neencwadi zam kwi-ipod, kodwa azithengiswa evenkileni, kuba zivela esikolweni kwaye / okanye zikwazi ukukhuphela iincwadi esele zifuna ios 5 hehe.
ndingayenza enye yalonto? 🙂
molo ulunge kakhulu kufundiso. Icala elisezantsi kukuba i-ipsw eguqulweyo ayinakukhutshelwa. Ungayiphakamisa okanye unike ikhonkco kwenye iseva. Enkosi.
intle kakhulu kodwa ndinengxaki yokuba xa ndiqhagamshela intambo ye-USB kwiPC andiyiboni ifowuni konke konke akukho nto ndiyenzayooooo
Ndiyazi ukuba kudlule ixesha elide ... kwaye i-6 iphumile kodwa ...
ikhonkco le-firmware livela kwi-megaupload 🙁
Ngaba umntu angandithiya ukudlula ikhonkco elitsha?
Isifundo: IJailbreak ngeFirmware yesiqhelo 3.1.3 (iguqulwe) kwi-iPhone 3G
Isifundo: Jailbreak iPhone Firmware 3.1.3 kunye Sn0wbreeze v1.3 (Windows)